वायुसेवा सञ्चालक संघले बढायो हवाई भाडा, हेर्नुहोस् अव कुन ठाउँ जान कति भाडा लाग्छ ? (सूचीसहित)
ARCHIVE, COVER STORY » वायुसेवा सञ्चालक संघले बढायो हवाई भाडा, हेर्नुहोस् अव कुन ठाउँ जान कति भाडा लाग्छ ? (सूचीसहित)
काठमाडौँ- मंगलबारदेखि हवाई भाडापनि बढ्ने भएको छ । वायुसेवा सञ्चालक संघले हवाई इन्धनको मुल्य बढेसँगै उडान तर्फको भाडा पनि बढाउने निर्णय गरेको हो । केहि समयअघि सरकारले आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनको भाडा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढाएको छ । भाडा बढाउनका लागि नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले स्वीकृति दिइसकेको छ। यात्रु सेवा शुल्क भने पुरानै कायम रहनेछ ।
बढेको भाडा अनुसार अवदेखि काठमाडौं धनगढीको भाडा अब १२ हजार ८ सय ७० हुने भएको छ ।त्यसैगरी माउन्टेन फ्लाइटको भाडा १ सय ७० रुपैयाँ बढ्ने भएको छ । नेपालगंज काठमाडौंको भाडा १ सय ६५ रुपैयाँ बढ्ने भएको छ । पोखराको भाडामा ८० रुपैयाँ थप इन्धन शुल्क लाग्नेछ भने भैरहवासम्मको भाडामा १ सय रुपैयाँ वृद्धि हुने भएको छ ।